I-Sulfur (okanye ui-sulphur) lilungu lekhemikhali. Isimboli okanye uphawu lwe-sulphur ngu-S, kwaye i-atomic number yayo ngu-16.
Xa itshile i-sulphur, iyanyibilika ibengamanzi abomvu okwegazi (Jonga lo mfanekiso ungaphezulu). Eli dangatye libonakala ngakumbi ebusuku.
I-Sulfur crystal emhlabeni
1.1 Ii-Chemical compounds
1.1.1 I-Sulfur oxides
1.1.2 I-Sulfur acids
1.1.5 I-Sulfates ne-bisulfates
1.1.6 Ezinye ii-sulfur compounds
2 Ukwenzeka nokulungiswa kwayo
5 Ubungozi nokhuseleko
7 Amaphepha azalana nala
8 Ezinye ii-websites
I-Sulphur ligaqa eliqanda ngombala neli- nonmetal. I-ethe-ethe ke le sulphur (ikroboka lula) kwaye ibubukhazikhazi be-crystalline. Itsha lula, itsho ikhuphe impongo yomsi we-sulphur dioxide oyityhefu. Inevumba elingacacanga. Ukuba iye yanyityilikiswa yaza yaboliswa ngokukhawuleza, yenza into efana ne-rubber ye-sulphur ebizwa ngokuba y"i-plastic sulfur". Izakuya isiya iphindela kwela bala layo liqanda ibe yinto ekroboka lula. Ayinyibiliki emanzini. Ivumba elaziwa ngokuba y"i-sulfur" livela kwi-hydrogen sulfide nakwezinye iikhemikhali ezifana kwanazo. Ezi sulfides zenzeka xa izinto zibola ngaphandle komoya.
Ii-sulphur compounds zizii-compounds zekhemikhali ezinee-sulphur ions. I-Sulphur iza ingeendlela ngeendlela: i-oxidation states oko kutsho i-oxidation iba kwezi zimo zilandelayo: -2 (i-hydrogen sulfide), +4 (i-sulfur dioxide, sulfites) ne +6 (sulfuric acid, sulfates) zizezona zixhaphakaileyo, nangona zikho ezinye imo ebakuzo i-oxidation.
I-Sulfur dioxide, yi-gas engenambala neyityhefu emandla, nesetyenziswa ukugcina ukutya ukuba kuhlale komile.
I-Sulfur trioxide, intlobo ngeentlobo, ngamanye amaxesha izinto ezingamanzi, izinto ezikhathazayo neziyityhefu.
I-Oleum, yi-sulfur trioxide enyibilika kwi- sulfuric acid
Ukumba isimbiwa iesiy-isulphur e-Indonesia
Umxube we-sulphur oxides namanzi
I-Sulfurous acid, iyagungqa, kwaye ayinamandla
I-Sulfuric acid, ayigunqi, yi-acid enamandla, inkoliso yayo isebetyenzisa i-chemical emva kwamanzi
I-Hydrogen sulfate, i-ion yenzeka kuphela xa i-sulfuric acid ilahlekelwe yi-acidic proton enye
I-Hydrogen sulfide, i-gas enevumba nengenamandla, iba-acidic xa inyibilikiswe emanzini.
Iityuwa ze-hydrogen sulfide
I-Ammonium sulfide, isetyenziswa kwimibhobho encangathi kukungcola.
I-Antimony trisulfide, isetyenziswa kwiintloko zematshisi ezi kuqhwithwa ngazo.
I-Arsenic trisulfide, yi-arsenic compound engenabungozi bungakanani
I-Barium sulfide, isetyenziswa ukwenza i- barium kwi-barium sulfate
I-Bismuth(III) sulfide, yi-bismuth ore
I-Iron sulfide, ifumaneka ngokwendalo njenge-pyrite
I-Lead(II) sulfide, ifumaneka ngokwendalo njenge-galena
I-Selenium disulfide, isetyenziswa kumafutha eenwele.
I-Potassium sulfide, isebenza ngamanzi
I-Silver sulfide, iyakrazuka xa ikwinto yesilivere
I-Thallium(I) sulfide, ibhaqa into esemzimbeni
I-Tin(II) sulfide, yi-solid okanye ligaqa elimdaka bumnyama ngebala
I-Tin(IV) sulfide, igaqa legolide, "igolide eli-mosaic"
I-Zinc sulfide, isetyenziswa kumaqam e-fluorescent
Iityuwa ze-sulfurous acid
I-Sodium sulfite, isetyenziswa ukugcina ukutya komile.
I-Potassium sulfite, isetyenziswa ukugcina ukutya kuhlaziyekile.
Iityuwa ze-sulfuric acid
I-Ammonium sulfate, isetyenziswa kwisichumisi okanye emgqubeni
I-Barium sulfate, isetyenziswa xa kuthathwa igesi ngendlela okusilwa ngayo ukutya esiswini.
I-Cobalt(II) sulfate, isetyenziswa ekwenzeni ibala lezinto ezinobom okanye eziphefumlayo.
I-Copper(II) sulfate, isetyenziswa xa kubulawa i-algae
I-Chromium sulfate, isetyenziselwa ukwenza i-chrome alum
I-Iron(II) sulfate, isetyenziswa kwi-reduction
I-Iron(III) sulfate, inqabile
I-Lead(II) sulfate, yilanti imhlophe iqinileyo kwincindi yesiciko see-batteries
I-Manganese(II) sulfate, isetyenziswa xa kugalelwa i-manganese emhlabeni
I-Nickel(II) sulfate, isetyenziselwa ukwenza ii-nickel compounds
I-Sodium bisulfate, isetyenziswa xa kusehliswa i-pH
I-Sodium sulfate, isetyenziswa kwizicoci okanye kwizinto ezikhucula ukungcola nasekwenzeni amaphepha.
I-Thallium(I) sulfate, ayinambala ayinavumba ayinancasa kwaye iyingozi kakhulu kuba iyityhefu.
I-Tin(II) sulfate, isetyenziswa ukwenza izinto ezenza ezinye iinkonkxa
I-Zinc sulfate, isetyenziswa ekwenzeni ibala kwizinto ezinobom okanye eziphefumlayo.
Ezinye ii-sulfur compoundsEdit
I-Sulfur(I) chloride, yinto engamanzi atyheli.
I-Sulfur(II) chloride, yinto enevumba nengamanzi abomvu
I-Disulfur dinitride, yinto eligaqa elingenambala
I-Tetrasulfur tetranitride, yinto eligaqa embala we-orenji
I-Sulfur tetrafluoride, yi-gas eyityhefu nengenambala
DI-Disulfur decafluoride, yinto engamanzi ayityhefu
I-sulfur hexafluoride, yigas enzima engenambala
Ukwenzeka nokulungiswa kwayo Edit
Umgubo we-Sulfur owenziwe nge-sulphur dioxide nange-hydrogen sulfide evela emalahleni
I-Sulfur ingafumaneka emhlabeni kufuphi nee-volcanoes. Ii-minerals ezininzi zinee-sulfur ions. Amalahle ane-sulfur ions ezivela xa esitsha. I-Hydrogen sulfide ne-sulfur dioxide zezinye ii-sulfur compounds ezithi zikhutshwe xa esitsha amalahle. Zenziwa ukuba zisebenze ukuze kwenzeke i-sulphur. Xa isemhlabeni i-sulphur, iyanyibilika, ize ityhalwe ngamandla inyuke ngemibhobho ngenxa yomoya oza ngoxinzelelo othi uminxane kule mibhobho.
I-Sulfur idla ngokusetyenziswa kumgubo wompu, kumachiza, nakwimatshisi. Imatshisi ikhupha i-sulfur dioxide xa ivutha, itsho ikhuphe ivumba layo. I-Sulphur iyinto ebalulekileyo kwii-cells eziphilayo. Ii-proteins ezininzi zine-sulfur. Ikwasetyenziswa nje nge- pesticide kwiifama ezi-organic.
Umgubo we-sulphur kuthiwa yashiyeka emva kokuba kwenzeke umntu ongaphezu kwendalo le siyibonayo.
I-Sulphur ayinabungozi, kodwa ii-chemical compounds ezenzeka xa isulphur ivutha okanye isitsha zinganobungozi obukhulu. I-Sulfuric acid, umzekelo, ingalijika ibala lephepha libemnyama!
Igama lakudala ebekubizwa ngalo i-sulphur lithi brimstone. I-Sulphur yayisetyenziswa kwi-fumigation (ukwenza ii-fumes) kunye namachiza kwisiGrike sakudala. Ngo-1777, u-Antoine Lavosier wabonisana noo-soscience okokuba i-sulphur kwakuyi-element.
Amaphepha azalana nalaEdit
Uludwe lwee-elements ezixhaphakileyo
Retrieved from "https://xh.wikipedia.org/w/index.php?title=I-sulphur&oldid=29081"
Last edited on 14 EkaTshazimpuzi 2018, at 19:32
This page was last edited on 14 EkaTshazimpuzi 2018, at 19:32.